နေအိမ် » ပြိုင်ပွဲ » Angry Birds ဂိမ်းစူပါပြိုင်ကား
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Angry Birds ဂိမ်းစူပါပြိုင်ကား
ဖေါ်ပြချက်: Angry Birds ကသူ့စက်ဘီးအပေါင်းတို့၌မစ်ရှင်လွန်ကူညီပါ!
ကစား: 261,047 tag ကို: အမျက်တော် ထွက်. ငှက်, အမျက်တော် ထွက်. ငှက် Rio, အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ဂိမ်း, အန်းဂရီးဘားဒ်စ်